पाथिभरा माताले हामी सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन,भोलि मंसिर २८ गते आइतबार,को राशीफल यस्तो छ तपाईको राशिफल ! « गोर्खाली खबर डटकम
पाथिभरा माताले हामी सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन,भोलि मंसिर २८ गते आइतबार,को राशीफल यस्तो छ तपाईको राशिफल !
२०७७ मङ्सिर २७ गते शनिवार प्रकाशित
भोलि मिति २०७७ साल मंसिर २८ गते आइतबार । भोलिको राशीफल यस प्रकार रहेको छ। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्।
विवाहपछि पनि फिल्म क्षेत्र छाड्दिन भन्दै विबाहपछिको यस्तो योजना बताइन् सुन्दरी वर्षाले